Fanontaniana dimy hanombanana ny varotrao sy ny lamin'ny varotra | Martech Zone
Alakamisy 19 martsa 2009 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Tena niraikitra tamiko io teny nindramina io tamin'ny herinandro lasa:
Ny tanjon'ny marketing dia ny hahatonga ny fivarotana ho be loatra. Ny tanjon'ny marketing dia ny fahalalana sy ny fahafantarana tsara ny mpanjifa ka ny vokatra na serivisy dia mifanaraka aminy ary mivarotra ny tenany. Peter Drucker
Mihena ny loharanon-karena ary mitombo ny isan'ny asa ho an'ny mpivarotra antonony, sarotra ny mitazona hatrany ny tanjon'ny ezaka ataonao amin'ny varotra. Isan'andro izahay dia miatrika ny olan'ny mpiasa, ny fanafihan'ny mailaka, ny fe-potoana, ny teti-bola… manelingelina ny zava-dehibe rehetra amin'ny orinasa salama.
Raha te handoa valiny ny ezaka ataonao amin'ny varotra ianao dia tsy maintsy manombatombana hatrany amin'ny fandaharam-potoanao ary mijanona eo an-tampon'ny fomba fampiasana ny loharano. Ireto misy fanontaniana 5 hanampy anao hitarika amin'ny programa marketing mahomby kokoa:
Ireo mpiasa miatrika ny mpanjifanao, na ny mpitantana azy ireo, mahafantatra ny fandefasan-kafatra ampitainao miaraka amin'ny programa marketing anao? Ilaina tokoa, indrindra amin'ireo mpanjifanao vaovao, ny fahafantaran'ny mpiasao ny antenaina napetraka mandritra ny fizotry ny varotra sy ny varotra. Ny fihoarana mihoatra ny andrasana dia mahasambatra ny mpanjifa.
Ny programa marketing anao ve manamora ny fivarotana ny mpiasao ny vokatrao na serivisinao? Raha tsy izany dia tsy maintsy dinihinao ireo sakana fanampiny hanovana mpanjifa ary ampidiro ny paikady handresena azy ireo.
Ny an'ny tena manokana, ny ekipa ary ny departemanta tanjona manerana ny fikambanananao mifanaraka amin'ny ezaky ny varotrao sa mifanipaka amin'izy ireo? Ohatra iray mahazatra dia orinasa iray mametraka tanjona amin'ny famokarana ho an'ny mpiasa izay mampihena ny kalitaon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ka manalefaka ny ezaka marketing anao.
Azonao atao ve ny manisa ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing ho an'ny paikadinao tsirairay? Mpivarotra maro no liana amin'ireo zavatra mamirapiratra fa tsy mandrefy sy mahatakatra tsara izay miasa. Miezaka ny miasa mafy isika toy ny hanao fa tsy asa manome.
Nanamboatra a sarintany amin'ny paikadin'ny varotrao? Ny sarintany misy ny fizotrany dia manomboka amin'ny fizarazarana ny vinavinanao amin'ny habe, indostria na loharano… avy eo mamaritra ny filàna sy ny fanoherana avy… ary avy eo fampiharana ny paikady azo refesina sahaza mba hitodihana any amin'ny tanjona afovoany vitsivitsy.
Ny fanomezana an'io haavon'ny antsipirihany io amin'ny programa marketing anao dia hampisokatra ny masonao amin'ny fifanolanana sy ny fotoana mety ao anatin'ny paikadim-barotra ataon'ny orinasanao. Ezaka tokony hataonao haingana fa tsy taty aoriana!
Tags: fampifanarahanampiasavarotra anatinyfampifanarahana amin'ny marketingmarketing sy varotraady amin'ny marketingfampifanarahana tanjona amin'ny marketingtanjona marketingbarotra tetikafampifanarahana hafatraPeter DruckerPeter drucker quotefampifanarahana amin'ny varotravarotra sy marketingFanamafisana ny varotrafampifanarahana amin'ny varotra varotra
Mar 20, 2009 amin'ny 10: 31 AM
Ny firesahako amin'ny fiteniko. Tsy azoko mihitsy hoe maninona ny olona tsy manana dingana ary amin'ny fomba tsy kalandrie ny kalandrie. Miasa ny fizotrany raha vao havaozina sy hatsaraina tsy tapaka. Milavo lefona mora foana ny olona amin'ny fiezahana hamorona iray ary ny mahamenatra an'izany rehetra izany dia; Firy ny hevitra tsara rava noho ny fizotran'ny fizotran'ny toe-javatra?
Lahatsoratra tsara! Indrindra, rehefa misaina toa ahy ianao! :)
Mar 20, 2009 amin'ny 11: 37 AM
Ity dia mandeha tsara amin'ny fizotry ny varotra rehetra. Izaho dia mijery teknika ara-barotra vaovao ho an'ny orinasako ary tsy manana ambadika marketing marina. Fitaovana lehibe ho ahy ity bilaogy ity.
Mar 23, 2009 ao amin'ny 10: PM PM
Ny laharana faharoa dia zava-dehibe amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny varotra. Nahita toerana niantsoan'izy ireo ny marketing aho, ny ekipa fisorohana ny varotra!
Somary myopika ny tenin'i Andriamatoa Drucker, am-panajana. Tokony ny:
? ny tanjon'ny varotra dia ny hahatonga ny marketing tsy tokony hihoarana? Ny tanjon'ny varotra dia ny hifandraisany tsara amin'ny mpanjifa ka ny vokatra na serivisy dia tsy mila hamidy?
- Tsy misy vokany